IMIBONO YOKUKHWELA IDEKK (UYILO LWEGALARI) - IIPATIO KUNYE NEEDEKSI
Eyona Iipatio Kunye Needeksi Iingcamango zokuThoba iiDekk (Uyilo lwegalari)
Iingcamango zokuThoba iiDekk (Uyilo lwegalari)
Guqula ukuhlala kwakho ngaphandle ube ngumthendeleko weemvakalelo ngezi zimvo zintle zomgangatho wokuthuka.
Nokuba unesiteji esitsha okanye ufuna ukubuyisela endaweni yakho imizila kaloliwe, ukukhetha uyilo olululo lwepropathi kunokuba ngumsebenzi obalulekileyo, ngakumbi njengoko kukho iindlela ezininzi zoyilo ezikhoyo. Kungenxa yoko le nto size noludwe lwezixhobo zokuthuka kunye neendlela ezahlukeneyo zoyilo ezichaza izinto ezilungileyo nezingalunganga kwaye ungalindela ntoni kwezi zoyilo zahlukeneyo.
Ukuhanjiswa kweCable Deck
Ukwehla kweenkuni ngomthi
Uthuko lwe-Metal Deck
I-Aluminium Deck yokuBhuqa
Umsebenzi we-Iron Deck Railing
UkuBhuqa iDeski edibeneyo
Ukuhamba ngeVinyl Deck
Ukuhamba ngomgangatho wePVC
Hog Wire Deck Ukunyelisa
I-Trex Deck Railing
Horizontal Deck Ukunyelisa
UkuThukisa iDeksi yanamhlanje
Umthi oneZithuba zeCopper
Umthi kunye neLattice
Abatyali boololiwe bakwidesika
Umthi oneBench yokuHlala
Ukubetha ngombhobho wentsimbi
Ukuhamba ngeenyawo kwi-Deck
Ukukhanya kwesitimela ukukhanyisa
Ukwehliswa kweDisk yabucala
Idisk yokuphakama kobude
Indawo yokuBhuqa ngePosti
Iileyili zekhonkco okanye iintambo zomgaqo wentambo lukhetho olufanelekileyo lokufumana ukufikelela okungaphazanyiswanga kwimibono ejikelezileyo, ukungena kwendalo kunye nokukhanya kwelanga. Izinto zekheyibhile zinokubiza kakhulu xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zomgaqo wokukhwela ngenxa yokuba uya kufuna isakhelo esomeleleyo ekufuneka uxinzelelo lwentambo lusebenze.
Ukuthungwa komgangatho wentambo kusebenza kakuhle kwimixholo yanamhlanje neyangoku.
Eziluncedo: Ukujonga okuphezulu
Bendlela: Iimfuno zeKhowudi zoKwakha eziKruqulayo, eziMfuno
Intambo emhlophe kunye ne-aluminium deck ngomgaqo yinto efanelekileyo yokuhombisa. Inkangeleko yonke inentambo yomgaqo wekhonkco olandela umkhombandlela wayo.
Ngaphandle kokunyuka kwezinto ezintsha zokuthuka, iinkuni zisengukumkani xa kusiziwa kumgangatho wokuthuka. Isizathu, umgangatho ofudumeleyo ongenakufaniswa kunye nokwahluka kwezinto eziphilayo. Xa unemibono yendalo enje kungcono kunokuba uyitshatise ngezinto ezenziwe ngomthi. Bona Okuninzi uyilo lomgangatho wamaplanga Apha.
Eziluncedo: Ixabiso leAesthetic, uyilo lweMisebenzi eyahlukeneyo
Bendlela: Isondlo esiphakamileyo, Ixabiso elininzi
Ukupeyinta iinkuni kuyasebenza ukuba ufuna ithinti eyahlukileyo yokuthuka kwakho ngomthi okanye ukuba ufuna ukukrola ukogcina ukubonakala kumphezulu womthi.
Eziluncedo: Enye indlela engabizi kakhulu, igcina umlinganiswa ofudumeleyo
Umxhasi: Ngomgangatho ongaphantsi okanye ongaphantsi komthi, umbala unokuphela ixesha elingaphezulu.
Ukugcina ingqibelelo yolwakhiwo lomgaqo wakho wokhuni, ukupeyinta iinkuni kunokuba yinto elungileyo. Ukuba unesitayile esidala, ubeka ifomula yefomty kwi-dents kunye neendawo ezingalinganiyo ngaphambi kokupeyinta kunokukunika ukubukeka okutsha okukhangela.
Eziluncedo: Ukhetho lwemibala eyahlukeneyo, enye indlela ebiza ixabiso eliphantsi kunokufaka umzila omtsha
Bendlela: Ukugcinwa okuphezulu
Ukuhamba ngomkhombe wentsimbi
Ukuthuka i-Metal deck kuyindlela engenamsebenzi yokunyusa indawo yakho yomgangatho ukuze utshatise indlela ophila ngayo. Izinto ezinemigangatho eyahlukeneyo zenziwe ngentsimbi ukuya kwintsimbi eyenziweyo. Isinyithi sinokusetyenzwa ngokulula ukuze ukwazi ukufikelela kulo naluphi na uyilo onalo engqondweni. Ziyathambeka kodwa zihlala ixesha elide kwaye zinokudityaniswa kunye nayo nayiphi na into enjengomthi okanye iglasi.
Eziluncedo: Ukunyenyiswa kweSondlo, okungabizi kakhulu, ukuSebenza ngeendlela ezahlukeneyo
Umthengi: Ufuna unyango ukuze kuthintelwe umhlwa (ngaphandle kwentsimbi)
Izinto ezingezizo ezomdiliya lukhetho oludumileyo lokusetyenziswa kwangaphandle ngenxa yokuxhathisa okukhulu kumhlwa kwaye zinokumelana nezinto ezingqongileyo ezinje ngemitha ye-UV, imvula nekhephu.
Ukwahluka kwendawo yokugcoba indawo yokuza enemibala eyahlukeneyo kunye noyilo, kunye ne-powder-coated aluminium decking lukhetho olukhulu xa ufuna izinto ezingenasondlo.
Eziluncedo: Ukurusa simahla, iiyantlukwano, ukumelana nemozulu, ezingabizi, ezinokuphinda zisebenze kwakhona, ezinobunzima
Bendlela: Ubushushu kunye nombane wombane
Eyona nto yenziwe ngentsimbi kunye nenxalenye yekhabhoni yenza intsimbi ebunjiweyo yomelele kodwa ibe bhetyebhetye. Ukusebenza oku kuyenza ibe yinto efanelekileyo yokufuna ukuba uyilo olwenziwe ngokwesiko. Isinyithi somgangatho wentsimbi esomeleleyo somelele kangangokuba sinokumelana nobunzima obongeziweyo babatyali kunye nezinye iintlobo zohlaza.
Eziluncedo: Yomelele, iyahlala, iyahluka
Bendlela: Kuyabiza, akunakuthatha impembelelo ngequbuliso.
Isinyithi esenziwe ngesinyithi kumfanekiso ongentla sibonisa uyilo oluntsonkothileyo olongezwe kwizithuba zalo ezithe nkqo. Omnye umboniso wendlela intsimbi eyenziwe ngayo ingakwazi ukuguquguquka ngokwaneleyo ukuba yenziwe kuyo nayiphi na uhlobo lobume.
Umxube wobuhle bezinto ezenziwe ngomthi kunye namandla aphezulu e-thermoplastic, indawo edibeneyo yinto entle kakhulu yalo naluphi na uhlobo lwesitayile somgangatho okanye umxholo.
Umgangatho wokudibanisa uza ngokwahluka kwemibala kunye noyilo onokukhetha kulo. Unokukhetha iikiti zokudibanisa iidesika eziza neseti epheleleyo kunye nazo zonke izinto ezifunekayo ukuze ubambe. Kulula ukuba zihlangane kwaye zinokuchithwa xa kufuneka njalo.
Eziluncedo: Ayizukubola, ihlala ixesha elide, isondlo esisezantsi, iphinde isebenze
Bendlela: Ithegi ephezulu yexabiso, imibala emnyama inokulitshitshisa ixesha elongezelelweyo.
Ukuba ufuna ukulungiswa okukhawulezileyo ngaphandle kokuqhekeza amawaka eedola kumgangatho wakho, ke izinto ze-vinyl zezona zikufaneleyo. I-Vinyl deck railing eyona nto iluncedo kukuba inokubonakala komthi, kodwa ayizukubola okanye itshise njengaye. Umphezulu ogudileyo ongenazintanda wenza ukuba kube lukhetho olufanelekileyo xa unabantwana abancinci bahlala bejikeleza kwindawo yakho.
Eziluncedo: Yomelele ngaphezu kweenkuni, ukumelana nomlilo, ukugcinwa okuphantsi, okuxabisa
Bendlela: Akunakulindeleka ukuba utshatise kunye nesitayile sendabuko, ukungafani kwemibala, ethambekele ekuqhekekeni
Xa ukhetha umbala olungileyo okanye uyilo lwee rails zakho, kungcono ukuba ujonge umbono ngalo lonke ixesha lonyaka kwaye ungangqinelana njani ngokugqibeleleyo nezinto zakho ozifunayo. Unokufumana isicatshulwa okanye ezimbini kwi-vista ejikelezileyo.
IVinyl emhlophe edityaniswe nesinyithi esenziwe ngesinyithi okanye intsimbi yenza uyilo lwangoku olunomdla. Kuyinyani kumxholo wayo we-monochromatic ngaphandle, imibala emhlophe kunye emnyama apho isetyenziselwa ukutshatisa umgangatho ongaphantsi wegrey.
Ukugcwala ngomgangatho weglasi kuvumela umntu ukuba afumane ezona mbono ziphezulu kwi Indawo esemva kwendlu . Akukho nto ithelekiswa nomgaqo wesitayile seglasi xa kufikwa ekubambeni ezona mbono zibalaseleyo kwii-vistas zakho ezingqongileyo.
Ukuhonjiswa kweglasi kuyilo ngokubanzi kusetyenziswa isinyithi, apho i-aluminium ithandwa kakhulu. Into emnandi malunga nezakhelo zealuminium kukugcina kulula, ukwahluka, kunye nokusebenza kwakhona kwemathiriyeli. Ukuba ufuna ukujonga okuphezulu kumgangatho wakho, ukugcwala ngeglasi ngaphandle kwesakhelo lolona khetho lukhethekileyo.
Ukuhamba ngezinyuko ngaphakathi
Qiniseka ukuba ujonga ikhowudi yakho yokwakha kunye nemicimbi yokukhuselwa kwezilwanyana zasendle ukuze uqiniseke ukuba ungakha ngokwasemthethweni ingqokelela yakho yeglasi.
Eziluncedo: Ukujonga okuphezulu, ngokulula ngokulula ukuze kugcinwe
Bendlela: Imiba yoKhuseleko kunye neMfihlo
Ngobunzima obunzima xa kuthelekiswa nezinto ezidityanisiweyo, ukungangqinelani komgangatho wePVC ngumgaqo okhethekileyo xa unezilwanyana ezijikeleze ipaki yakho. Ngezinto ezininzi onokukhetha kuzo kumacandelo erediyasi enziwe ngokwezifiso okanye ngokulula, ungazidibanisa ngokulula kunye nethagethi yakho okanye isitayile esele sikhona.
Imizila kaloliwe ye-PVC ihlala iza neziqinisekiso zokufikelela kwiminyaka engama-25. Unokukhetha izinto zePVC ezigutyungelwe ngumgubo ukuze zisetyenziselwe ubomi obude kunye nolondolozo olusezantsi.
Eziluncedo: Yomelele kakhulu, kulula ukuyifaka, iiyantlukwano, icutha ubushushu
Umxhasi: Ukwandiswa kunye nokunciphisa kunokwenzeka ngokutshintsha ngokukhawuleza kwiqondo lokushisa
Ukuba ufuna iprofayili ephantsi kunye nokukhethwa okufikelelekayo kwintambo yentambo yentambo, intambo yehagi yeyona ndlela ifanelekileyo. Ilungele i-rustic, ilizwe elinemixholo, kunye nokuhombisa okuphefumlelweyo kwimizi-mveliso, zikwayinto eyamkelekileyo ukufezekisa inkangeleko yanamhlanje okanye yangoku.
Kukho umtsalane othile we-hog wire deck railings ezikhoyo kwezinye iintlobo zezinto. Ifunyenwe njengenye yexabiso eliphantsi kuyilo lokubiyela ngabaqulunqi bendawo, ngoku yeyona nto iphambili kwizakhiwo zanamhlanje.
Eziluncedo: Luhlala ixesha elide, Vumela imibono, Flexible, Easy ukuyifaka
Bendlela: Ayiboneleli ngasese
Njengempahla edibeneyo, i-Trex Deck Railing ifaka ama-95% e-recycling chips, iipellets, i-sawdust kunye nenani lezinto zeplastiki. Izinto ezinobuhlobo ze-eco zenziwe yiTrex Inkampani, Inc., oyena mvelisi ophambili wokwenza izinto ezizezinye zomthi ezijolise kwimathiriyeli yokusetyenziswa kwangaphandle.
I-Trex ye-railing inezinto ezininzi eziluncedo njengamabala kunye nokuphela kweempawu ezinganyangekiyo kunye nokukwazi kwayo ukumelana nokujija okanye ukuxobuka. Ukwahluka kubonelela abathengi uluhlu olubanzi lwemibala kunye noyilo abanokukhetha kulo kunye neeteksi zetreyini zetreyini ukulungiselela ukufakwa ngokulula nangokulula.
Eziluncedo: Akukho londolozo lobomi bonke, ulungelelene nokusingqongileyo, luyaphela ukumelana, ukufunxa ubushushu obusezantsi
Bendlela: Iindleko zokuqala ezibizayo
I-Timbertech yenye indlela eya kwi-Trex ekwabonelela ngeenkqubo zokuhombisa kunye nokuthuka. I-Timbertech ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo okanye iitrayi ngemibala emhlophe, emnyama, isley grey, brownstone kunye neKona (brown brown).
Iinkonzo: Ukuqina kunye nokuhlala ixesha elide, ukumelana nemozulu kunye nokugcinwa okuphantsi.
Bendlela: Ixabiso eliphezulu.
Uyilo lwedrafiki yoyilo
Ngasentla sigubungele izixhobo ezisetyenziselwa iintlobo ezahlukeneyo zomgaqo kaloliwe. Ngoku siza kujonga iintlobo ezahlukeneyo zoyilo ukukubonisa uluhlu lwezinto onokukhetha kuzo kumgangatho wakho.
Ukufezekisa inkangeleko yanamhlanje yokuhombisa kulula ngokuhamba ngomgaqo wetreyini ethe tyaba. Abasebenzisi izinto ezininzi zokubopha kunye nezixhobo ngokuthelekisa ukufakwa nkqo. Iileyili ezinqamlezileyo zishiya ukucoceka okulula, okulula emehlweni.
Phantse zonke izinto zokuhombisa zinokusetyenziswa kusetyenziswa isitayile. Umthi, isinyithi, intambo yocingo, i-PVC, kunye nokuhamba ngomgaqo odibeneyo kunokwenza umtsalane othe tyaba ugqibelele ukutshatisa iidesika zangoku nezezi mini.
Eziluncedo: Ixabiso eliphantsi ukufakela, ukuguquguquka koyilo
Bendlela: Imiba yoKhuseleko
Izinto ezinjenge-decking ethe tye, imigca ecocekileyo, ebandakanya isinyithi, iglasi kunye nezinto zeplastiki zinika indlela yokujonga okwangoku. Iidesika zangoku zizinto ezintle onokukhetha kuzo kuba awunakukhathazeka malunga nokucoca ii-nooks ezingaqhelekanga kunye neekreyini ezifumaneka kwiindawo ezininzi zemveli.
Olu hlobo lukhetho olukhulu xa uyilo olulula kunye oluhlaziyiweyo olusebenza kakuhle ngefanitshala yakho yanamhlanje kunye nezinye izinto ezihonjisiweyo.
Eziluncedo: Kulula ukuyigcina, Tshatisa izixhobo zangoku, zitshiphu kumgangatho wesiko
Umxhasi: Uyilo olwahlukileyo kunokuba nzima ukuza ngalo.
Ukuthuka komgangatho wangoku kunye nezithuba ezidityanisiweyo kunye nensimbi engenasici.
Njengayo nayiphi na ingaphakathi langoku, Umgangatho wale mihla Ukuthuka kunika ukujonga okulula, okusebenzayo kodwa okubonakalayo. Kwaye, ngokuthuka komgangatho wangoku ungayibopha imbonakalo yendlu yakho iyonke ibe kukuhlaziya kunye nokuhlala ngaphandle okunomtsalane.
Eziluncedo: Ukujonga okuhlaziyiweyo, kulula ukukugcina, kusebenza kakuhle ngezinto zangoku
Umxhasi: Uyilo luthintela ukusetyenziswa kweempawu zokuhombisa, zinokubonakala zithandeka
Lo mgangatho usebenzisa iiposti zomthi kunye ne-aluminium ethe tyaba ukwenza uyilo lwangoku.
Uyilo lwala maxesha lwejometri yoyilo lomgaqo lubonelela ngomdla obonakalayo kule ndawo yomthi kunye netafile yokutya yangaphandle.
Uhlobo lwerustic lubalaselisa ukuvela kwezinto zemvelo. Ungabonisa ubuhle bendalo bemithi engaqhelekanga ngawo onke amaqhina, izifotho kunye nezinye izinto ezirhabaxa. Ngobume bayo obuphefumlelweyo bendalo kunye nemibala yasemhlabeni, i-rustic deck railing lukhetho olukhulu ukuba ufuna ukufezekisa umtsalane ongathobekiyo kunye nomoya wasekhaya.
Eziluncedo: Yenza umlinganiswa, Isibheno esiBodwa se-Aesthetic
Umxhasi: Izinto ezingaphendulwanga zingonakalisa ixesha elidlulileyo
Faka i-railing yokuhombisa eyenziwe ngokwezifiso, ukuze ufumane ukujonga okuguqukayo kunye nokobuqu kwizitimela zakho zomgangatho. Isinyithi esenziwe ngesiqhelo siyathandwa zizinto eziyilo zomntu ngenxa yokulula kwayo ukuba igotyiwe kwaye ibunjwe kuyilo olunqwenelekayo. Nangona unokwenza nezinye izinto ezinjengomthi kunye nealuminium ukwenza ezomatshini zangoku kunye nezejiyometri.
Ingqungquthela yokuphila kwasedolophini, uthango olumhlophe yongeza umtsalane kunye nokuziva ulungile nakweyiphi na indawo yangaphandle. Ukongeza i-twist yanamhlanje kwiileyili zesiko, unokutshintsha izinto zangoku kuyilo. Khetha umjikelo ojikeleziweyo okanye ophindwe kabini opikishwe endaweni yendlela yakudala ekhombisiweyo / ekhombisiweyo. Unokwenza uyilo olwahlukileyo kunye neeposti zeposi ukongeza umdla kwi-silhouette emhlophe.
Nawuphi na umxholo okanye isitayile ofuna ukusiphumeza kuloliwe wakho wedreyini, ukhuni kunye nokudibanisa ubhedu kunokuba kuko konke. Kuxhomekeke kuyilo lweenkuni kunye neetreyini zomgangatho wobhedu, iidiliya, ezangoku, i-rustic, okanye enye yeendlela zakudala, i-combo inakho konke.
Olu thuko lwentaba yomgangatho owenziwe ngokumangalisayo lusebenzisa ubhedu njengezithuba zomgaqo kaloliwe kwaye luye lushiye yonke eminye imizila kunye nezinto ezenziwe ngomthi, oko kudala ukuba kumgangatho weediliya kunye neerustic.
Umsebenzi weLatticews ubusoloko uyilo olunomtsalane locingo kunye neentsimbi. Ziyasebenza njengokuba zinomtsalane ngakumbi xa unemibono emangalisayo yokongeza.
Eyona ndawo ifanelekileyo yokutshata emva komtshato emva komtshato
Uyilo locingo lwelatti inokusetyenziswa ngeendlela ezininzi xa kufikwa kumgangatho wendlela. Unokukhetha ukugubungela okupheleleyo koololiwe bakho okanye udibanise nezinye iipatheni zokwenza isinyithi ukuze wenze umphumo owahlukileyo.
Ukuthintela okuthe tye kwiidesika zakho kunokuhamba umgama omde, ngakumbi xa uyile iileyili zakho zomgangatho ukulungiselela abalimi ukuba babonise. Umthi kunye nesinyithi zizinto eziguquguqukayo ukwenza izityalo ezilinganayo zikaloliwe kwindawo yakho yomgangatho. Ezi ntlobo ziyasebenza njenge izixhobo zokucoca ucingo enokuba yenye indlela yokuphucula ngakumbi indawo yakho yegadi.
Ukuhlala kweebhokisi zokutyala ecaleni kwendlela yetreyini yenye indlela yokwenza indawo enkulu yegadi kwindawo yakho.
Yongeza isiko ibhentshi elingaphandle yindlela entle yokubandakanya uyilo oluncedo kumgangatho wedonga lakho. Oku kunokwakhiwa ngexabiso eliphantsi njengeprojekthi ye-DIY.
I-Aluminium okanye umbhobho wensimbi engenasici engenasiphelo isetyenziswa ngokuxhaphakileyo ngaphakathi nangaphandle kwezitepsi kunye nokuhamba ngomgaqo. Abanye abaninimzi basebenzisa i-conduit yensimbi njengeprojekti yokuthuka i-DIY ukwenza eyabo inkqubo yeendleko eziphantsi. Nangona kunjalo, i-conduit ngokubanzi iya kuba nomhlwa emva kweminyaka embalwa iyenze ingabonakali.
Ukulandela iikhowudi zokwakha zengingqi kwizinyuko zakho kuya kuqinisekisa ukuba imigangatho yokhuseleko iyalandelwa. Ikhowudi yokwakha yamazwe aphesheya (i-IBC) kunye neKhowudi yeNdawo yokuHlala yaMazwe ngaMazwe (i-IRC) iphakamisa ukuphakama komgaqo kaloliwe wee-intshi ezingama-34-38 ngelixa ii-intshi ezingama-36 kuloliwe okhusela. Jonga iikhowudi zalapha kwindawo yakho ukuze uqiniseke ukuba awuphoswa nayiphina imilinganiselo ebalulekileyo kwizitepsi zakho zokuhamba.
Ukuvezwa rhoqo kwezinto zangaphandle kufuna izinto ezingafakwanga emanzini kunye nokufunxa okufumileyo. Ukongezwa kokungangenwa kwamanzi kunokudingeka kwizinto zokhuni kunye nezinto zetsimbi.
Uyilo olunxulumene noko jonga kwigalari yethu ye izinyuko zangaphakathi zokuhamba Apha.
Ukongeza izibane kwidesika yakho kunokuseta imo yepropathi yakho ngokulula kwaye kukhanyise iileyili zakho zedreyini kungekuphela nje kokongeza isibheno kuthintelo kuyilo lwakho luphela, kodwa kubalulekile ukhuseleko. Ukusebenza kwezibane zakho kuya kuxhomekeka kumbala kunye nokukhanya okukhethileyo.
Ukongeza izibane kumgangatho wakho kungongeza umdlalo kwaye usete imood. Izibane zepost Post kunye nezibane zezitepsi zikhethwa kakhulu kulo naluphi na uhlobo lokukhanya komgangatho wokukhanyisa. Ungonga umbane ngokusebenzisa izibane ze-LED kunye nelanga.
Xa ubumfihlo bubaluleke kakhulu, indawo yokugcwala yabucala inokubonelela ngesigqubuthelo esiphezulu ngaphakathi kwepropathi yakho. Ubuncinci beemitha ezi-2 ukuphakama buya kukufumanela indawo yokufihla efunekayo, kodwa kuya kufuneka ukhusele iimvume zokubiya. Apho iimfuno zetrafikhi yakho yetreyini yangasese ziya kuxhomekeka kwindawo okuyo.
Imizila yakho yokubiyela esebenzayo ayifuni kuba yiyo yonke into eluncedo. Ukwenza lula ukujonga, unokukhetha ukusebenzisa iisilayidi zomthi ezithe tyaba ukwenza ukubukeka okufudumeleyo nokunomtsalane. I-trellis topper ikwayenye into elungileyo njengoko unokufumana zombini ukhuseleko kunye nokuthintela isibheno eludongeni olunye.
Kwi-trellis topper, khetha uyilo oluvalelweyo kwicandelo elisezantsi apho ubuncinci i-2 / 3rds yokuphakama okufunwayo kwindawo yakho yabucala. Emva koko, dibanisa i-trellis topper ngaphezulu ukwenza isahlulelo sabucala.
Ikhowudi yoKwakha yaMazwe ngaMazwe kunye neKhowudi yeNdawo yokuHlala yaMazwe ngaMazwe inokusetyenziswa njengezalathiso zakho zokuqala xa ucwangcisa iileyili zakho zomgangatho. Nangona ikhowudi yengingqi iya kuthi ekugqibeleni ilawule ngaphezulu kweKhowudi yoKwakha yaMazwe ngaMazwe, imilinganiselo esemgangathweni ephindiweyo kwiiManyano zaMazwe ngaMazwe ayide isuswe kwimigangatho yeenguqulelo zengingqi.
I-IBC kunye ne-IRC zombini ziluhlu lwama-34 ukuya kuma-38 njengobuncinci kunye nokuphakama kwezitepsi eziphakamileyo kumgangatho ongaphandle.
Ukukhwela ngomngxunya wokukhusela, ii-intshi ezingama-36 zihlala zisetyenziselwa isithuba sithuba. Xa kufikwa kumba wokuba kude kangakanani izithuba kufuneka kucetyiswe ukuba ne-30 okanye nangaphezulu phakathi (kwamaqonga) oololiwe bokugada. Imizila kufuneka ibenendawo ephezulu ye-4 phakathi komgaqo kwaye inokumelana nomthwalo weepawundi ezingama-50 ngenyawo lesikwere.
Ukwenza uyilo lwakho zama ukusebenzisa ifayile ye- isoftware yoyilo Inkqubo evumela umntu ukuba alinge ngeendlela ezahlukeneyo zendlela yokuthuka kunye nolwakhiwo.
Iindlela zokuphakamisa intombazana
mde umthombo wamanzi ngaphakathi
indlela yokubhala izifungo zomtshato
indlela yokususa amaqhuma okucheba ngokukhawuleza
iindlela zokumxelela ukuba uyamthanda